Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Luka Jovic Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo lebhola ye-Football Genius eyaziwayo "ISerbian Falcao". Ibali lethu le-Luka Jovic yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts kuletha i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa.
Indaba ye-Luka Jovic yabantwana- Ukususela kwixesha lokuzalwa kwasekuqaleni
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nobuchule bakhe phambi komgomo, omnye oye waba ngumnye wabadlali bebhola ekhatywayo yaseYurophu. Nangona kunjalo, isandla esincinane sebalandeli bebhola sibheka i-Biography kaLuka Jovic enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwe-ado, masiqale.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
U-Luka Jovic wazalwa ngosuku lwe-23rd kaDisemba 1997 kunina, uSvetlana Jovic noyise, uMilan Jovic (owayengumdlali webhola) kwisixeko saseBijeljina, eBosnia naseHerzegovina.
UJovic wakhula kwikhaya elihluphekileyo kunye nabazali bakhe nodade kwidolophana yaseRatar, eyi-14 eekhilomitha ezantsi kweBijeljina. Ngaphambi kokuba azalwe, abazali bakhe kunye namalungu entsapho yonke banobuhlungu bokuqala nokuxoshwa kwe-1990 eyenzeka eBijeljina, eBosnia naseHerzegovina.
ULojo Jović Usapho kunye nabanye abantu belizwe lakwabo babechukumiseka ekuqaleni kwe1990.
Ukungazinzi kweBosnia kunye neHerzegovina kwakunqanda abadlali bebhola ukuba babe nomsebenzi ocebileyo kunye noyise kaLocovic uJovic. Ngokudabukisayo, uMilan Jovic wathola ithuba lokudlala ibhola lebhola lePattizan eBelgrade eyayinomvuzo omncinci kwindlu yakhe.
Ukukhula, kwakungabikho amathoyizi okanye imidlalo, nje ibhola lebhola uJovic alibetha ngayo kunye noyise. Ubaba kaLoco Jovic u-Milan ngethuba elithile kwiqhinga lakhe elicothayo wagqiba ukuqhubeka ephila amaphupha akhe ngonyana wakhe.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ukuba nomama onothando webhola lebhola kunye nomama oxhasa, kwakungokwemvelo ukuthanda umdlalo omhle ukuba ufakwe kwi-Young Jovvic osemncinci owayesoloko ebonakala ephuma kunye noyise. UMilan wakhuthaza unyana wakhe ukuba agxile kwimfundo yebhola ngethemba lokumnceda aqhubeke ephila amaphupha akhe angabonakaliyo.
Luka Jovic- Ezemfundo kunye noBucdup. Credit to IG
ULocko Jovic waziswa kumdlalo ngexesha le-5 kwi-2002, unyaka wakhe umnqweno webhola lebhola wambona ephazamise imfundo yakhe ngenxa yokufumana ithuba lokuqalisa umsebenzi.
Kwi-2004, uLucky onenhlanhla emva kwelingo eliphumelelayo lafumana ithuba lokubeka isiseko sakhe somsebenzi kwindawo ehloniphekileyo Mini Maxi. Le ngqungquthela yophuhliso eBelgrade kubantwana abakhulileyo phakathi kwe-4 ne-12. Ngaphambi kokuhamba ukuya kumdlalo wakhe wokuqala, ubaba uJovic wamfundisa indlela yokusebenza kunye neenyawo zombini. Nangona u-Jovic ekuqaleni wayemncedisa unyawo lwakhe lokunene, ke, wafunda ukushaya ibhola ngokuzithemba nangokwesobunxele.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala
I talente kaLuka Jovic ibonakala ngokucacileyo ukusuka kumdlalo wakhe wokuqala ukuya kwiligi. Ubusazi?… Wafaka inkohliso emdlalweni wakhe wokuqala, umdlalo owawubona abalawuli bebhula bafungisa ukunika imali kubaba bakhe ukuba bakhuthaze unyana wakhe ukuba afake iinjongo ezingaphezulu.
UMilan Jovic wanikelwa i-€ 50 ngenjongo nganye enyana yakhe. Kwakhona wahlawulwa iindleko ezihambayo ze-dinnari ze-2000 ezazithengisa uLuka ukusuka kwidolophana yasekhaya waya eBelgrade. Zonke ezi zinto zenziwa ngenxa yokuba unyana wakhe uthathwa njengomdlali wabo oyigugu.
Kwenye yeemidlalo zikaJovic apho azingqinela khona iinjongo, wafundwa nguToma Milićević, umseshi oBomvu we-Red Star wammema ukuba athathwe kunye neR Red Star eBelgrade. Luka Jovic wadlula imibala endizayo kwaye wajoyina iqela. Ngezantsi umfanekiso wakhe kwimbala yeklabhu.
Luka Jovic Career Early Life
Ngaphambi kokujoyina iqela, uyise kaJovic wambamba uqeqesho kunye noParzan, iqela alidlale lona awayebacela ukuba batyikitye uJović. UPartizan wanikela ngoMilan 200 i-euro ngenyanga ukuze indodana yakhe uLocovic idlale nabo, kodwa watshintsha ingqondo yakhe waza wagxininisa kwinkwenkwe yakhe yayiza kuhlala ne-Red Star.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Indlela eya kwiNdaba ibali
UJović waqhubeka ekhanyela kumaqela olutsha waza wabuzwa ngokukhawuleza njengento emangalisayo yekamva. Ekhulela ekubeni ngumntwana osemncinci, waqala ukuguqula uBrahimovic noRadamel Falcao. Ubusazi?… UJovic wabhala amagama ezithixo zakhe kwiibhanki emva kwakhe kwiprofayili yakhe ye-Facebook.
Nge-28 Meyi 2014, eneminyaka eyi-16 iminyaka, uJovic wenza iqela lakhe lobugcisa nge-Red Star. Ekuqaleni ukuya emsebenzini wakhe, waqhekeza irekhodi likaDejan Stanković njengowomncinci ongcono kunomdla wokukhuphisana kwimbali yeqela.
Luka Jovic Road ukuya kwiNdaba yeNdaba. Ikhredithi kwiRedStar kunye neG
Le ngqungquthela yembonakalo yemboniselo yonke yabaseYurophu ijonge ukuba isayinwe. Isigqibo esafika ngoFebhuwari ka-2016 xa uJovic ethatha isigqibo sokufudukela emadlelweni amatsha. Inkwenkwezi yebhola yebhola ye-18 eneminyaka elidala yenza inxaxheba yakhe yokuqala ekusebenzeni kwakhe xa ejoyina amaqhosha asePortugal uBenfica.
Xa Ukuya Kwamaqhinga:
Ngoxa uJovic wayeseBenfica, kwakukho iingxelo zeBhola leaks ezonakalise umdla owenziwe kwi-mkontrakthi kaJović, ingqungquthela yeendaba ezidambisa inkwenkwezi encinane. Kamva kwakhona, uJovic waqala ukunyuka ekuphuculeni kwaye oku kubangele ukuxakeka kwebhola lebhola.
Umzila weLuka Jovic ukuya kwiNkqantosi yeBali-Xa uhamba uhamba. Credit to IG
"Ndineengxaki zengqondo, ndandihlala ekhaya kwaye ndenza iimpazamo ezikhulu."
wathi uJovic Ukuhlukana ingxelo. Umqhubi waseSerbia oye wahamba ephuma kwi-Red Star ekhethiweyo yokuqala ebonakala ehlaselwa ngokudlala uBenfica B eSegunda Liga.
Emva kokulibaleka eYurophu, elinye iqela lalimi kuye ngokuqhubeka kwabo isicelo seSerbia. Kwakuyiqela leJamani e-Eintracht Frankfurt ogqitywa nguJović ekugqibeleni kwesohlwayo seBenfica. Iqela liyamkela ngetyala kwaye kamva wenza isivumelwano sakhe sigxina.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Ukunyuka Kwidumo Ibali
Emva kwesiqingatha sesibini seJamani, i-styllating kunye nokukhawuleza yafumana ifomu yakhe kwaye yaba yinxalenye yeqela lokuqala lokuqala le-Eintracht Frankfurt. UJovic waziwa njengomntu obetha ibhola ngokukrakra ngeenyawo zombini. Waye kelelwa ngeengqiqo zengqiqo, ixesha eliye lazisa iinjongo ezintle kunye nemibhiyozo emikhulu.
ULojo Jović Uphakamisa Udumo Lolwazi. Ikhredithi yokudlala i-FOR90
UJovic wanyamezela ukunyuka kweemeteor ukuphakama okwenza ukuba ibe yindawo ehamba phambili kakhulu kunazo zonke naseYurophu. TUmdlali waseSerbian oye wayedlala iMadrid esezicangweni zakhe uye waba namandla kwaye akanakulungele ukuthabatha inyawo kwizithuthi zegesi. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Ulwalamano lobomi
Xa uJovic ephakama udumo, ngokuqinisekileyo ukuba abalandeli bakhe baya kubuza umbuzo ovuthayo. Ngubani na intombazana kaLovos Jovic, umfazi okanye njengabanye abaya kubiza, WAG ?.
ULoco Jovic ubudlelwane noAndjela Manitasevic ukususela kwiintsuku zakhe zobutsha kunye neR Red Star eBelgrade. Ngezantsi umfanekiso weentaka zothando ngexesha lobudlelwane babo bokuqala.
ULober Jovic Ulwalamano Ubomi- Amazwi Angaqinisekanga
Ukujonga kwisithombe sabo ngasentla kunye nesezantsi, kuyacaca ukuba uAndjela Manitasevic wayeneminyaka engaphezu kwendoda yakhe. Yintoni!! Emva koko, uthando lokwenene lubalulekile kwaye iminyaka yobudala yinto nje.
UAndjela Manitasevic noLuka Jovic
ULocko Jovic uyaziwa ngokubonakalisa ukubaleka kwakhe kokubili kunye nentombi yakhe uAndjela Manitasevic kwimidiya yoluntu. Ngaphandle kokungathandabuzeki, bobabini banandipha ubudlelwane obuqinileyo obakhelwe kubuhlobo.
UAndjela Manitasevic noLuka Jovic banomdla wokuba nexesha elihle
Inyaniso yokuba abathandekayo baye bahlala besithandana ixesha elithile bashiya ngokungathandabuzekiyo ukuba umtshato unokuba yisinyathelo esilandelayo esilandelayo.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Ubomi bomntu
Ukwazi impilo kaLovo Jovic kunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo. Ukuqala, uJovic unengqondo evulekile. Unethemba elikhulu, unomdla, kwaye uyakuthanda utshintsho. UJovic unako ukuguqula iingcamango zakhe kwizenzo ezizenzekelayo kwaye uya kwenza nantoni na ukuphumeza iinjongo zakhe zomsebenzi kunye neenjongo zakhe.
Abadlali bebhola, njengathi thina kwi-LifeBogger bathanda izilwanyana zethu kunye no-Luka Jovic ngokwakhe akayena mnye. Nawe kukho ilizwi elilapho akukho ukunyaniseka okusele kumdlalo wamanje, aluqwalaselanga ubudlelwane obambisene phakathi kukaJovic, izinja zakhe kunye neesilwanyana.
Luka Jovic Personal Life Facts
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- LifeStyle Life
UJovic uxabiswa kwi-£ 49.50 m echaza ngokwenene ukuba ungumdlali webhola. Nangona kunjalo, ukugweba kwi-akhawunti yakhe yeendaba ezentlalo, ungumhlobo webhola lebhola lebhola elichitha imali yakhe eneendlela ezithandekayo zomhlaba kunye namanzi.
Luka Jovic Indlela yokuphila
I-Jovic, nangona kunjalo, ayibonakali ngeemoto ezimnandi kakhulu, utywala, i-swagger kunye namantombazana. Uhlakaniphile ngokulawula iimali zakhe kulezo nkalo zobomi.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Ubomi Bentsapho
Ukuthetha ngokuvela kwintsapho kaLoco Jovic, basuka kwiYugoslavia emva kokuba iMfazwe Yehlabathi II yaqhekeka kwiiphabliki ezintandathu enye yazo Bosnia neHerzegovina. Uyise kaLuka Jovic u-Milan, owazalelwa e-1975 wayengumnye wecala lasePartizan elaliseSerbia.
Ubaba kaLuka Jovic u-Milan Jović. Nostalgija
Ngokungafani nendodana yakhe uLuka, uMilan akazange aphumelele kwiindawo ezininzi eziphakamileyo kwimisebenzi yakhe. Udlale imidlalo ye-82 kuphela kwi-career yakhe ebalulekileyo ekuphumeleleni i-Premier League yaseRussia ngonyaka we-2000 ngaphambi kokuxhoma iibhuthi zakhe kwi-2003.
UMilan Jovic kunye nomkakhe uSvetlana bakhetha ukuhlala ubomi obuphakathi kweSerbia naphezu kobutyebi bendodana ebusweni. Le ngcaciso yafika xa isiJamani BILD iphephandaba liye laya kukhangela imifanekiso yekhaya likaLovovics yaseSerbia. Bamfumanisa uyise kunye neendawo zabo zentsapho eziphakathi.
Ubaba kaLuka Jovic -Papa uMilan. Mboleko kwi umfanekiso
Ngethuba ludliwano-ndlebe noBlid, uMilan Jovic wambonisa ukuba wayekhohlisile umfazi wakhe, uSvetlana ngenxa yomsebenzi wonyana wakhe waza wafumana inkokhelo kule nkqubo. Namhlanje, uyise kaYovic, umama, udade kunye neentsapho baye bafumana iinzuzo zomngcipheko ezithathwe yinhloko yentsapho.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Inyaniso engekho
Ubusazi?… NgoNovemba i-2015 yinyanga enzima yeentsapho zikaLuke Jovic. Eli lixesha ixesha leentsapho lihlupheke kwizandla zomntu osuka eLoznica (isixeko saseSerbia) esongela uLobert Jovic ukuba ukuba akayi kuhlawula imali, "aphule imilenze".
Luka Jovic Untold Facts. I-Credit kunye ne-IG.
Umsolwa ubanjwe emva kokuba abazali bakaJovic babikelele le nto kumapolisa athatha ithuba lokuphanda aze athole inkohlakalo.
Ubusazi?… ULocko Jovic ube nomngcipheko wemoto yakhe yaseMercedes edolobheni lasePatkovača, kufuphi neendawo zokuzalwa eBijeljina eBosnia naseHerzegovina. Ngengozi, uLobert Jović walimala kodwa wamsindiswa emva kokungenelela ngokukhawuleza.
ULocko Jovic ube nengozi. Mboleko kwi Fenix.
Ubusazi?… UJovic unothambo ebusweni sakhe, enye eye yabangela ukuba abalandeli bazibuze ukuba ithambo lithetha ntoni.
Ewe, ibonakala njengomfanekiso kaYesu obonisa inkolo yakhe yobuKristu yaseOrthodox exhaphakileyo eSerbia. UJovic waqala ukubonisa le tattoo ngexesha leNdebe yeHlabathi yeFIFA ye-2018 eRussia.
Ubusazi?… UJovic ngumdlali omncinci kunabo bonke abadlali abanamaphulo amahlanu kwi-Bundesliga game. Ingxelo ebanjwe ngaphambili nguRobert Lewandoski. Ngezantsi ividiyo ye-rekodi yakhe yokuphula iinjongo ezintlanu kumdlalo omnye.
Luka Jovic Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts- Isishwankathelo seVidiyo
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda i-Luka Jovic Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts. Ku LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
Ingxelo kaSergej Milinkovic-I-Savic Childhood I-Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-25 kaJanuwari ngo-2019
UVictor Lindelof Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts